★မြန်မာ့အလင်း★: မွတ်ဆလင်တွေက သူတို့ကို . . . သူတို့ .. . တိရိစ္ဆာန်လို့ယူဆပါတယ်
မွတ်ဆလင်တွေက သူတို့ကို . . . သူတို့ .. . တိရိစ္ဆာန်လို့ယူဆပါတယ်
မြန်မာပြည်က ကုလားတွေဟာ မွတ်ဆလင်ဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ တကယ်တော့ ဂုဏ်ယူဖို့ထက် ရှက်ဖိုပဲသင့်ပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်ရင် မွတ်ဆလင်ဖြစ်လာတာ သူတို့ ဆန္ဒအလျှောက်မဟုတ်ပါဘူး။ အာရတ်တွေဟာ ကုလားတွေကို စစ်တိုက်ပါတယ်။ စစ်ရှုံးတဲ့အခါမှာတော့ ကုလားတွေရဲ့ အဖိုးကို သတ်ပါတယ်။ အဖွားကိုလည်း အာရပ်တွေက အုပ်စုဖွဲ့ပြီး မုဒိမ်းကျင့်ပါတယ်။ ကုလားပေါင်း သိန်းနဲ့ချီပြီး သတ်ခံရပါတယ်။ သူတို့ အဖိုးအဖွားတွေ ကိုးကွယ်နေတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာနဲ့ ဟိန္ဒူ ဘသာရေးအဆောက်ဦးတွေကို ဖျက်ပြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အားလုံးကို မွတ်ဆလင် လုပ်ပြစ်ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်ပြောင်းပြီးတော့ ဇတ်လမ်းက မဆုံးသေးပါဘူး။ အာရပ်တွေဟာ အားလုံးကို သူတို့ရဲ့ ကျွန်တွေလုပ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှရှိနေတဲ့ မွတ်ဆလင် ကုလားတွေဟာ အာရပ်တွေရဲ့ ကျွန်မျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့အဖွားဟာ အာရပ်တွေရဲ့ မုဒိမ်းကျင့်တာကို ခံရပါတယ်။ ဒီတော့ မွတ်ဆလင်ကုလားမှန်သမျှ အာရပ်တွေ မုဒိမ်းကျင့်ခံထားရတဲ့ ကျေးကျွန်မျိုးဆက်တွေလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ မွတ်ဆလင်ဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူတယ်ဆိုရင် သူတို့ကိုသူတို့ မုဒိမ်းကျင့်ခံရတာ ဂုဏ်ယူတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။
မွတ်ဆလင်ဖြစ်သွားပြီဆိုကတည်းက ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်၊ ဟိန္ဒူတွေလို လူအခွင့်အရေး မရတော့ပါဘူး။ မွတ်ဆလင် မလေးရှားအစိုးရဟာ တခြားဘာသာဝင်တွေကို မွတ်ဆလင်ပြောင်းနိုင်တဲ့သူတွေကို ဆုငွေတွေပေးနေပါတယ်။ (ဆောင်းပါး) ။ မွတ်ဆလင်တွေကိုတော့ လွတ်လပ်စွာ ဘာသာပြောင်းခွင့်မပေးတဲ့အပြင် ပြစ်ဒဏ်လည်းခတ်ပါတယ်။ အခုတင်ပြချင်တာကတော့ မလေးရှားက ဖြစ်ရပ်လေးတစ်ခုပါ။ မွတ်ဆလင်မလေးဟာ ဟိန္ဒူကုလားကို လက်ထပ်ပြီး ဘာသာပါ ကူးပြောင်းလိုက်ပါတယ်။ တကယ်ယုံကြည်လို့ ပြောင်းတာပါ။ ဒါဟာ လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ အခြေခံရပိုင်ခွင့်ပါ။ အဲလိုပြောင်းလဲတဲ့အတွက် နှင့် ဘာသာခြားကို လက်ထပ်တဲ့အတွက် သူ့ကို ပြစ်ဒဏ်ခတ်ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အခြေခံရပိုင်ခွင့်လေးတောင်မပေးဘူးဆိုတဲ့ သဘောဟာ သူတို့အချင်းချင်း တိရိစ္ဆာန်လို မြင်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။
ဘယ်လောက်အထိ ရက်စက်လဲဆိုရင် အဖေ၊ အမေ၊ ကလေး သုံးဦးဟာ တကွဲတပြားစီ လုပ်ပြစ်ခံရပါတယ်။ ဘယ်လောက်သနားဖို့ကောင်းလဲဗျာ? အချင်းချင်းတွေ့ခွင့် မပေးပါဘူး။ မိခင်လည်းဖြစ်နေပြီး ကလေးနဲ့ကွဲ ယောကျားနဲ့လည်းခွဲခံရတော့ ဘယ်လောက် စိတ်ထိခိုက်မလဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ထမင်းလဲ မစားနိုင်ဘူးဆိုပဲ။
ပလီဆရာပြောတဲ့စကားကို သဘောကျပါတယ်။ မွတ်ဆလင်တွေကို ဘာသာကနေ ထွက်ခွင့်ပြုလိုက်ရင် သူတို့လဲ နိဂုံးချုပ်ပြီဆိုပဲ။ ပလီဆရာပြောတာ သိပ်ကိုမှန်ပါတယ်.. မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်တွေဟာလည်း သူတို့ကို တိရိစ္ဆာန်လို ပြုမူတဲ့ကိစ္စကို မခံနိုင်တော့ပါဘူး။ အသိဥာဏ်ရှိတဲ့သူဟာ မွတ်ဆလင်မဖြစ်လိုပါဘူး။ ယုတ်ညံ့သည့် မွတ်ဆလင်ဝါဒကြီးဟာ မကြာမီလုံးဝ ပျောက်ကွယ်တော့မှာပါ။ ဗီဒီယိုလေးကြည့်ပါခင်ဗျာ။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 3:30 AM